काठमाडौंमा गर्मी बढेसँगै झाडापखाला र टाइफाइडका बिरामी बढे
काठमाडौ । पछिल्लो केहीसमय यता बढेको गर्मीका कारण मौसमी रोगका बिरामी बढेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । काठमाडौंका वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल र पाटन अस्प...
भरतपुरमा अस्पतालकाे शिशु वार्ड भरिभराउ, दादुरा र ठेउलाकाे प्रकाेप
चितवन । गर्मी बढेसँगै यहाँका अस्पताल बिरामी बच्चाले भरिएका छन् । उच्च तापक्रमसँगै सबैभन्दा बढी बच्चा बिरामी भएकाले उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलाले जान...
मेची अस्पतालका कर्मचारी बोक्दैनन् शल्यक्रिया गरेका बिरामी
भद्रपुर (झापा) : मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरको प्रसूति गृहमा सुत्केरीकाृ स्वास्थ्यमा अस्पतालले हेलचेक्र्याइँ गरेको पाइएको छ। शल्यक्रिया गरी सुत्केरी भएकालाई अप्रेसन थिएटरबाट बाहिर निकाली बेडसम्म पुर...
उखरमाउलो गर्मीका कारण पश्चिमी तराईका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। बढ्दो गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। पश्चिम तराईको भैरहवामा यो हप्ता छ वर्षयताकै उच्च तापक्रम मापन गरिएको थियो। मौसम पूर्वानु...
उफ् गर्मी !
असार ३, २०७६ रुपन्देही – अत्यधिक गर्मीका कारण रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । विगत १ सातादेखि तापक्रम बढेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको हो । वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण घरबाहि...
बिज्ञापन – नीरा गौतम, पवित्रा घिमिरे र जनक श्रेष्ठ अत्यधिक गर्मीका कारण रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । विगत एक सातादेखि तापक्रम बढेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको हो । वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्...
चिकित्सकहरु प्रतीक्षालयमै बसेर बिरामीको उपचार गर्दै
डडेल्धुरा, असार ३ । सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका डडेल्धुरा अस्पतालका चिकित्सकले प्रतीक्षालयबाट सेवा दिन सुरु गरेका छन् । चिकित्सकको लापरवाहीले सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले...
अत्यधिक गर्मीका कारण रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । विगत एक सातादेखि तापक्रम बढेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको हो । वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किन छाडेकाले बजारमा ...